को होला मध्यरातमा यौन दुर्व्यवहार गर्ने ? बल्ल रहस्य खोलिन् ज्योति मगरले ! (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
को होला मध्यरातमा यौन दुर्व्यवहार गर्ने ? बल्ल रहस्य खोलिन् ज्योति मगरले ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं, मंसिर १४ । छोटा पहिरन, गोप्य अंग देखाउनमा कन्जुस्याइँ नगर्ने, खुला विचार, मस्ती र मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्न जानेकी कलाकार भनियो भने ज्योति मगरको हकमा खास फरक पर्दैन ।
दुई अर्थ लाग्ने गीत संगीतदेखि अनेक स्टन्ट बाजीले ज्योति चर्चामै हुन्छिन् । उचार्इ, रूप, फिगरको हिसाबले ज्योति कुनै मोडल जस्ती लाग्दिनन् । तर, हुन्छ उनकै चर्चा । मोडलका रुपमा ज्योति खोज्नेहरू पनि धेरै छन् ।
याे पनि पढ्नुस महोत्सवमा ज्योति मगरलार्इ निषेध
गायन त उनको महत्वपूर्ण अंश भर्इ नै हाल्यो । हालसालै गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले एकादशी मेलाको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी हुन नवलपरासी गएकी थिइन् । कार्यक्रम सकेर होटेल फर्केपछि आयोजकमध्ये एकले उनलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो–
ट्याग्स: Jyoti Magar